आजको राशिफल / २०७६ आश्विन १९ गते आइतबार - Purbeli News
प्रकाशित मिति: आइतबार, आश्विन १९, २०७६ समय: ६:३२:१७
वि.सं. २०७६ आश्विन १९ गते आइतबार तदनुसार ई. सं. २०१९ अक्टोबर ०६ तारिख, परिधावी नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, शरद् ऋतु, आजको चाडपर्व र उत्सव : नवरात्रअन्तर्गत महागौरी भगवतीको पूजा आराधना गर्ने दिन, अष्टमी व्रत, गोरखकाली पूजा, महाष्टमी, कालरात्री, नेवारी पर्व कुलक्षिभ्वय, आजको मूहुर्त : दीक्षाग्रहण, कलशचक्र, आश्विन शुक्लपक्ष (कौलाथ्व) अष्टमी तिथि, दिउँसो ०२:२२ बजेसम्म, त्यसपछि नवमी तिथि, पूर्वाषाढा नक्षत्र, बेलुका ०७:१५ बजेसम्म, त्यसपछि उत्तराषाढा नक्षत्र, चन्द्रमा धनु राशिमा, मध्यरात्रीपछि ०१:३४ बजेसम्म, त्यसपछि मकर राशिमा, अतिगण्ड योग, मध्यरात्रीपछि ०४:१४ बजेसम्म, त्यसपछि सुकर्मा योग, सुरुमा बब करण दिउँसो ०२:२२ बजेसम्म, त्यसपछि बालब करण मध्यरात्रीपछि ०२:४४ बजेसम्म, अन्तिममा कौलव करण, आनन्दादि योग : शुभ, चन्द्रवर्ण : पहेंलो, चन्द्रदिशा : पूर्व, योगिनीदिशा : ईशान, वारशूल : पश्चिम, काठमाण्डौ, नेपालमा, सूर्योदय : बिहान ०५:५८ बजे, सूर्यास्त : साँझ ०५:४३ बजे, दिनमान : २९ घडी २२ पला (११ घण्टा ४५ मिनेट, रात्रीमान : ३० घडी ३८ पला (१२ घण्टा १५ मिनेट)
राहु काल : साँझ ०४:१५ देखि ०५:४३ सम्म, यमघण्ट : दिउँसो ११:५१ देखि ०१:१९ सम्म, गुलिक काल : दिउँसो ०२:४७ देखि ०४:१५ सम्म
शुभ वारवेला : दिउँसो ०१:१९ देखि ०२:४७ सम्म, अमृत वारवेला : बिहान १०:२३ देखि ११:५१ सम्म, लाभ वारवेला : बिहान ०८:५५ देखि १०:२३ सम्म, आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा उत्तर र पूर्व दिशाको तथा महिलाको नेतृत्वमा नैऋत्य (दक्षिणपश्चिम) र वायव्य (उत्तरपश्चिम) दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ । तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा पान वा घिउ खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभफल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ ।
नवरात्रअन्तर्गत सिद्धिरात्री भगवतीको पूजा आराधना गर्ने दिन, महानवमी, मन्वादि, बौद्धावतार, स्याक्वट्याक्व, भोलिको मुहूर्त : रुद्राभिषेक(रुद्रीपूजा), अग्निवास(होमादि), कलशचक्र, पञ्चाङ्गखण्ड समाप्त भएको छ, यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय नेपालको राष्ट्रिय समयमा आधारित समय हो । ठाउँअनुसार तिथि, नक्षत्रादि र नामाक्षरमा पनि समय अन्तर हुनेछ ।
प्रणय र रोमान्सतर्फ मानसिक झुकाव बढ्नाले काम गर्न जाँगर चल्नेछैन, शरीरमा आलस्यले डेरा जमाउने समय छ । घुमघाम, भेटघाट र मनोरञ्जनका लागि समय निकाल्न धौधौ हुनेछ । नचाहेको र नौलो ठाउँको यात्राको सम्भावना छ । सामान्य विवादले ठूलो रूप लिन सक्छ, प्रेमसम्बन्ध वा प्रणयप्रसङ्गमा तिक्तता आउन सक्छ, सचेत हुनुहोला । सरकारी जागिरेका लागि कामको चाप बढ्ने छ । मनोरञ्जनात्मक काम वा रमणीय यात्राको सम्भावना छ, आम्दानी राम्रै भए पनि रामरमाइलोका क्रममा खर्चको मात्रा ह्वात्तै बढ्न सक्छ । नयाँ उद्योगधन्दा वा व्यापारव्यवसायमा हात हाल्नु राम्रो हुँदैन ।
पाँचौं भावमा रहेको कमजोर चन्द्रमाको प्रभावले मन एकतमासको बन्न सक्छ । एकाबिहानै विगतका अनुभूतिमा रुमल्लिंदा निराशाभाव उत्पन्न हुनसक्छ । नघोरिई आत्मबलको प्रयोग गरी अघि बढेमा र रोकिएका कामप्रति लगनशीलता देखाएमा सफलता तपाईंको मुट्ठीमा हुनेछ । पठनपाठन र बौद्धिकताप्रति आकर्षण नै हुनेछ । मिहिनेत गरेमा विद्यार्थीले उच्च सफलता आर्जन गर्नेछन्, आजको चिन्तन र उपाय फलदायी हुनेछ । बढी व्यस्त हुनाले आवश्यक काम रोकिन सक्छ । मानसम्मानमा गिरावट आउन नदिन प्रयास गरिने छन् । आवेग र क्रोधमा नियन्त्रण गर्नु राम्रो हुन्छ, नत्र सहयोगीहरू टाढिन सक्छन् ।
बन्दव्यापारमा समय दिन सकिंदैन । झिनामसिना घरायसी काममा आजको समय व्यतीत हुनेछ । अचलसम्पत्ति वा पैतृक धनको कारोबारबाट सामान्य लाभ लिन सकिने समय छ, तर श्रमको मूल्याङ्कन हुन नसक्दा निराशा हुनेछ । आम्दानीका मार्गहरू देखिने छन्, तर खट्ने अनुकूलता नहुनाले दिक्क लाग्नेछ । थोरबहुत आय भए पनि खर्चको मात्रा बढ्न सक्छ । शत्रुबाट सजग भई आलोचनाबाट बच्ने प्रयास गर्नुहोला । मातापिता र अभिभावकवर्गको स्वास्थ्यस्थितिमा देखिएको खराबीले चिन्तित तुल्याउन सक्छ । पेसा, व्यवसाय वा नोकरीमा संलग्न व्यक्तिले भनेजस्तो सफलता नपाउन सक्छन्, तर निराश हुनुपर्दैन ।